ပုံရိပ်အသစ်များသည် LEGO ကိုပြသသည် Friends တောတွင်းနွေရာသီ 2020 စုံ
04 / 05 / 2020 05 / 05 / 2020 ဂရေဟမ် 4015 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, 41421 ကလေးဆင်တောတွင်းကယ်ဆယ်ရေး, 41422 ပန်ဒါသစ်ပင်အိမ်, 41423 ကျားလေထုပူဖောင်းတောတွင်းကယ်ဆယ်ရေး, 41424 တောတွင်းကယ်ဆယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်း, Friends, Lego, Lego Friends
အသစ် Lego Friends subtheme ဟာသူယူပြီး, ဒီနွေရာသီလမ်းအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်artအင်းအိုင် City တောတွင်းမှဂိုဏ်း - ပုံအသစ်များကိုဖြန့်ချိလိုက်သည်၊
Lego Friends ဒီနှစ်အစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် တောတွင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အာရုံစူးစိုက်မည့်အစုတစ်ခု မကြာသေးမီကပုံရိပ်တွေအစုံမှာပထမ ဦး ဆုံးတစေ့တစောင်းပေးအတူ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ထိုသေတ္တာများဓာတ်ပုံများကိုသေးငယ်တဲ့ sde အပေါ်ခဲ့ကြသည်။ အခုဆိုရင်ပရိသတ်တွေကဖြန့်ချိလိုက်တဲ့ပုံအသစ်တွေမှာပါတဲ့အစုံတွေကိုကြည့်လို့ရပြီ Kostickylega.
ဤလှိုင်းလုံးတွင်ပန်ဒါ၊ ပျင်းရိခြင်း၊ ဆင်၊ ဆင်၊ ကျားဖြူနှင့်ကြက်တူရွေးများအပါအဝင်တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံရှိသည်။
တစ်ခု ယခင်ကမမွငျခဲ့ထုတ်ဖော်ခဲ့သည် - 41423 ကျားလေကောင်းလေပူဖောင်းကယ်ဆယ်ရေး.
LEGO ဆယ်ခုသည် lockdown တည်ဆောက်ရန်သတ်မှတ်ထားသည်
အဆိုပါသစ်တောသစ်တောများသည်ဇွန်လ ၁ ရက်တွင်စတင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ပုံများလည်းဖြန့်ချိခဲ့ကြသည် Lego Hidden Side, Lego Marvel ၇၆၁၅၃ Avengers Helicarrier, Lego Marvel 76152 Loki ၏သေစားသေစေသောအမျက်ဒေါသ လာမည့် Lego Jurassic World အစုံ နှင့် Lego ဖန်တီးသူ အစုံ - 31108 Caravan မိသားစုအားလပ်ရက်, 31109 ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘော နှင့် 31110 အာကာသ Rover Explorer ကို.
← Lego Friends 41423 ကျားပူလေပူဖောင်းကယ်ဆယ်ရေးထုတ်ဖော်
Lego Friends နွေရာသီ 2020 ပြည့်စုံတရားဝင်တရားဝင်ပုံရိပ်တွေကိုရ →